Otu esi ezo foto ma ọ bụ faịlụ na ngwaọrụ gam akporo gị Akụkọ akụrụngwa
Ngwaọrụ mkpanaka abụrụla ihe dị mkpa na ndị njem dị mkpa maka ọtụtụ ndị ọrụ n'oge na-adịbeghị anya. N'ime ha anyị na-echekwa ọtụtụ ozi n'etiti, dịka ọmụmaatụ, n'ọtụtụ ọnọdụ ọtụtụ foto ma ọ bụ ọtụtụ faịlụ nke ọrụ anyị ma ọ bụ ụbọchị anyị kwa ụbọchị na-apụta.
Offọdụ n'ime foto ndị a ma ọ bụ faịlụ ndị a nwere ike ịhụ site na ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịnweta ekwentị anyị na enweghị nsogbu ọ bụla, mana ụfọdụ ekwesịghị ịhụ onye ọ bụla na-abụghị anyị. Ka ị ghara ịhapụ ịhapụ gị ozi ahụ dị mkpa, ma karịa ihe niile, maka mmadụ ọ bụla, n'isiokwu a anyị ga-akụziri gị esi zoo foto ma ọ bụ faịlụ na ngwaọrụ gam akporo gị, n'ụzọ dị mfe na enweghị ọtụtụ nsogbu.
Nhọrọ mbụ nke anyị kwesịrị iburu n'uche iji mee ka ozi na faịlụ anyị pụọ n'anya anya, ga-abụ mepụta ọtụtụ profaịlụ na ekwentị mkpanaaka anyị, ọ bụrụ na ihe karịrị otu onye ọrụ nwere ike ịnweta ọnụ. N'ihi nhọrọ a pụtara na nke mbụ ya na gam akporo 5.0, Lollipop na-enye gị ohere ịmepụta profaịlụ onye ọrụ maka onye ọ bụla na-eji ngwaọrụ ahụ.
O bu ihe nwute na nke a adighi ike ma otutu oge ihe anyi choro ime bu Emehiela, ndị ọrụ ole na ole na-eso ndị ọzọ kerịta ngwaọrụ mkpanaka ha ma ọ bụ mbadamba ha na ndị ahụ na-ekerịta na-abụkarị ebe ọrụ na-echekwa obere ma ọ bụ ihe ọ bụla a ga-echebe site na ele ndị ọzọ anya.
1 Otu esi zoo faịlụ na mkpanaka site na ngwa
1.1 Faịlụ Zoro ọkachamara
1.3 Ihe ozo
Otu esi zoo faịlụ na mkpanaka site na ngwa
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na otu ohere iji zoo faịlụ ma ọ bụ foto na gam akporo bụ site na ịmepụta profaịlụ maka onye ọrụ ọ bụla na-eji smartphone, n'enweghị obi abụọ ọ bụla na ọ bụghị nhọrọ kachasị mma anyị nwere ike ịtụgharị. N'uche anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ idobe faịlụ ọ bụla ọfụma n'anya anya, ị kwesịrị jiri ngwa ọ bụla anyị ga - egosi gị n'okpuru.
Faịlụ Zoro ọkachamara
Nhọrọ mbụ anyị ga - egosi gị, na nke kachasị amasị anyị bụ Faịlụ Zoro ọkachamara, Onye na-enyocha faịlụ na ndabara nwere ohere nke ịzobe ọ bụghị naanị faịlụ kamakwa folda niile, ihe nwere ike ịba uru mgbe ụfọdụ. Na mgbakwunye, ọzọ nke nnukwu nhọrọ ya bụ na ọ na-enye gị ohere ịnye visibiliti na faịlụ ma ọ bụ folda n'oge ọ bụla, ihe dị mgbagwoju anya na ngwa ndị ọzọ nke ụdị a.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na-akpali mmasị na-enye anyị ohere ichedo ngwa site na okwuntughe, nke mere na faịlụ anyị niile dị n’anya ndị na-ahụ ihe. Ma n'ezie enwere ike ibudata ngwa ahụ n'efu na ụlọ ahịa ngwa ngwa Google ma ọ bụ Google Play, yabụ amaghị m ihe ị na-eche ibudata ya ozugbo ma bido iji ya wee jiri ya mee ihe. Na-echekwa faịlụ gị abụọ na ngwa gị.
Developer: Zoo ngwa
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ichebe onyonyo ụfọdụ na ngwa a kapịrị ọnụ, nke n'ọtụtụ oge bụ ihe anyị chọrọ izobe n'anya ndị ọzọ, ngwa zuru oke maka nke a bụ Ngwa, nke nhọrọ nke abụọ ga-enyekwa anyị ohere ichedo ngwa ahụ site na iji ya.
Ngwa a nwere nsụgharị n'efu, nke anyị niile nwere ike ibudata, mana anyị nwekwara ike ịgbasa nhọrọ ya na ọrụ ya site na ịghọ ndị ọrụ adịchaghị maka obere ego, ọ bụ ezie na ịchọrọ ịdebe foto gị zoro ezo ma gbochie ụfọdụ ngwa ndị ọzọ na isi mbipute ị ga-enwe karịa ezu.
Developer: Mobilelọ nyocha
Google Play juputara na nhọrọ di iche iche iji chedo faịlụ gi ma obu ihe onyonyo, yana machibido ohere nke ngwa, mana anyi enyochala isi ihe di na edemede a, obu ezie na ihe obula nwere ike ibu ngwa nke anyi huru ugbua ekwenyeghi, anyị ga-enye gị ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ izochi onyonyo ma ọ bụ vidiyo, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ a;
Zoo foto, vidiyo
Developer: LOL KLAS
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ chebe nchekwa ma ọ bụ faịlụ site na anya prying Site na ndị ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ site na onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịnweta ngwaọrụ mkpanaka gị ma ọ bụ mbadamba, ị nwere ike ịhọrọ maka ngwa a na-adọrọ mmasị;
Developer: Ụlọ ọrụ NewSoftwares
Ọ bụ ezie na ndị ọrụ niile nwere ngwaọrụ mkpanaka anyị na ọ dị obere na anyị nwere ike ịkekọrịta ya na mmadụ ma ọ bụ gbaziri ya, ọ dịghị mkpa ka itinye ụdị ụdị a arụnyere. Ọ bụkwa na anyị niile na-enwekarị foto nke onye ọ bụla agaghị ahụ. Inwe nchedo ha nwere ike ịdị ezigbo mkpa ọ bụghị naanị na ọ bụrụ na enyi ma ọ bụ onye ikwu anyị ewere ngwaọrụ anyị n'aka anyị ka anyị lee ihe ọ bụla anya, mana ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ezuru ọdụ ahụ, ka ha wee ghara ịnweta nnweta ọdịnaya ndị ahụ.
App igbochi pụrụ ịbụ nnọọ mkpa, na agbanyeghị na ọtụtụ ngwa na-ajụrịrị anyị maka aha njirimara na paswọọdụ iji nweta, enwere ndị ọzọ na-enye anyị ohere ịchọpụta n'oge niile, nke ga-anọgide na-emeghe oge niile maka onye ọ bụla nwere ike iwere ekwentị anyị, ee, ọ bụrụhaala na ha mara Kpọghe ụkpụrụ ma ọ bụ ọnụ ohere PIN.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị umengwụ iji rụọ ọrụ ndị dị mkpa iji kpuchido ngwaọrụ mkpanaka anyị na sistemụ arụmọrụ gam akporo, mana ọ bụrụ na ịchọrọ izere nsogbu n'ọdịnihu, kpuchido foto gị ndị mebiri emebi, yana faịlụ ndị dị gị mkpa na ọbụlagodi ngwa ụfọdụ na ị nwere ike itinye ụfọdụ ndozi.
You bụ otu n'ime ọtụtụ ndị ọrụ na-eji ngwa iji zoo foto ha ma ọ bụ faịlụ ha?. Gwa anyi na oghere edere maka ihe post a kwuru ma obu site na otu netwọkụ ndi anyi nọ n’ime ya, gwakwa anyi ụdị ngwa ị jiri diri gi ka anyi nile wee nwalee ha ma lee ma onwere n’ime ha tinye ya n'isiokwu a iji mee ka o zuo oke ma zie ezi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » android » Esi zoo foto ma ọ bụ faịlụ na ngwaọrụ gam akporo gị
Movistar na-akwụsị akara ngosi Yomvi ma na-aga n'ihu na homogenization ya